ULutris: Iklayenti lomdlalo elivuselelwe futhi elihle kakhulu le-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Njengoba sibonile ezincwadini ezimbili zakamuva, eyodwa ku- I-GameHub nomunye mayelana Itch.io, ukunikezwa kwezixazululo (amaklayenti / amapulatifomu) we imidlalo ku-GNU / Linux iyakhula futhi iya ngokuqina. Futhi edume Lutris kukhona, emncintiswaneni wokwenza I-GNU / Linux okuhle kakhulu Isistimu yokusebenza kubalandeli be imidlalo yevidiyo.
Lutris, njengabanye amaklayenti wegeyimu weGNU / Linux, inikeza ukufinyelela okulula kukhathalogi enkulu futhi ekhulayo ye imidlalo yevidiyokusuka kuzo zombili i-retro, online, noma ezindala nezanamuhla ideskithophu yokududuza, elula noma yabadlali abaningi. Futhi lokho, kweyakhe igatsha lamanje (0.5.X) ikuvumela ukuthi ugijime kahle noma yimuphi umdlalo kusixhumi esibonakalayo esisodwa futhi uhlanganise ezinye izitolo ezifana ne- I-GOG y I-Steam, ukungenisa ilabhulali yakho yomdlalo ekhona nemibhalo yokufaka ekhona edingekayo.
Njengoba kuchaziwe, ngendlela elula kufayela le- okuthunyelwe kwangaphambilini mayelana noLutris, kusho ukuthi:
"Ipulatifomu yokudlala evulekile yeLinux eyenziwe nge-python 3, esivumela ukuthi sifake futhi siphathe imidlalo ehambisana neLinux ngendlela elula futhi evela endaweni enobunye. Leli thuluzi linikeza ukusekelwa kwemidlalo yendabuko ye-Linux kanye nama-Windows emulators nemidlalo engaqhutshwa kusetshenziswa iwayini. Ngendlela efanayo, inokusekelwa okubanzi kwe-Playstation, imidlalo ye-Xbox, phakathi kwabanye.".
Kodwa, Lutris akuyona elula Iklayenti ledeskithophu lemidlalo, kodwa futhi ine- Iwebhusayithi esemthethweni esebenza njenge isitolo (imakethe) yezinhlelo zokusebenza kanye / noma imidlalo, evumelana nohlelo lweklayenti ledeskithophu, ukuze vumela, lula futhi kusheshiswe, ukumiswa nokufakwa kwemidlalo Of efanayo. Kakhulu ngesitayela se- I-Steam.
1.1 Yini uLutris?
1.2 Izici zepulatifomu
1.3 Ukufakwa Kwesicelo
1.3.1 Ukufakwa nge-terminal
1.3.2 Ukubhaliswa kwe-akhawunti eku-inthanethi
1.3.3 Ukusetshenziswa kweLutris
1.3.4 Faka umdlalo
1.3.5 Ukuqalisa umdlalo ofakiwe
Lutris iklayenti ledeskithophu nepulatifomu yokudlala ye- umthombo ovulekile ukuze I-GNU / Linux, lokho kusiza umsebenzi wokudlala ngokuphathwa, ukufakwa nokulungiswa okuhle kwemidlalo.
ULutris akayithengisi imidlalo. Inikeza ukufinyelela kumidlalo yamahhala, evulekile nevulekile. Ngemidlalo yezohwebo, kufanele ube nekhophi ukufaka umdlalo ku Lutris. Ngaphezu kwalokho, ipulatifomu isebenzisa izinhlelo ezibizwa nge- "Abagijimi" Ukwethula imidlalo, Laba badayisi (ngaphandle kweSteam neziphequluli zewebhu) banikezwa futhi baphathwe yi Lutris, ngakho-ke awudingi ukuwafaka nomphathi wephakheji yakho.
Izikhungo ze Lutris zizenzakalelayo ngokuphelele ngokusebenzisa izikripthi, okungabhalwa nge- I-JSON noma i-YAML. Ama-akhawunti wokuzikhethela angakhiwa nge- iwebhusayithi esemthethweni bese ubaxhumanisa namakhasimende we Lutris. Lokhu kuvumela iklayenti lakho ukuthi livumelanise ngokuzenzakalela umtapo wolwazi wekhasi lewebhu. Njengamanje kungenzeka ukuvumelanisa i-akhawunti (umtapo wezincwadi) we I-Steam ngomtapo wezincwadi we Lutris.
Iklayenti le Lutris igcina kuphela ithokheni lapho uxhuma kuwebhusayithi, futhi imininingwane yakho yokungena ngemvume ayilondolozwa. Usebenzisa izikripthi, ungadlala imidlalo ngaphandle kwesidingo sokusetha ngesandla. Ekugcineni, ILutris ixhaswa yi-100% ngumphakathi, ukuqinisekisa ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwephrojekthi, ngakho-ke vula njalo ukuze uqondise iminikelo noma nge Ipulatifomu kaPatreon.
Ku isigaba sokulanda sewebhusayithi esemthethweni de Lutris, ungazibona ngokucacile izindlela ezahlukahlukene zokufaka ezahlukahlukene I-GNU / Linux Distros. Ngokwethu, njengokujwayelekile ukufakwa kuzokhonjiswa ku- I-MX Linux 19.1 (DEBIAN 10.3).
Ngezansi kwe- Inqubo yokufaka nokusetshenziswa kweLutris:
Ukubhaliswa kwe-akhawunti eku-inthanethi
Ukuqalisa umdlalo ofakiwe
Njengoba ukwazi ukubona, ukufakwa nokusetshenziswa kwe- Lutris Ilula kakhulu, futhi ikhathalogu yemidlalo yamahhala, evulekile nevulekile ayiyona enkulu kuphela kodwa futhi iyakhula ngenxa yokuxhaswa okukhulu konjiniyela begeyimu yevidiyo kanye «Comunidad de Software Libre y Código Abierto». Ngeminye imininingwane ku- Lutris isiza sayo esisemthethweni singatholakala ku- GitHub.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Lutris okulungisiwe futhi okuhle kakhulu «Cliente para juegos» mayelana neyethu Izinhlelo Zokusebenza Ezimahhala Nezivulekile, ebuye ibe nesikhulumi sewebhu esihle kakhulu nohlu olukhulu lwemidlalo etholakalayo, inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » ULutris: Iklayenti lomdlalo elivuselelwe futhi elihle kakhulu le-GNU / Linux
Kungakuhle uma isekela izinhlelo
Yebo, kungaba kuhle.
IMonado, ipulatifomu yomthombo ovulekile yamadivayisi weqiniso wangempela
Uhlobo olusha lweGo 1.14 selukhona futhi lezi yizindaba zalo